ကျွန်ုပ်၏စမ်းသပ်မှု - ပြန်လည်နာလန်ထူပြီးနောက်ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်း - သင်၏ ဦး နှောက်ပေါ်
ငါဒီကိုရောက်နေတာကြာပြီ။ ဒီ post ပြီးသွားရင်ခဏနေမှာမဟုတ်ဘူး။ ငါမကြာသေးမီက porn ကိုစတင်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုပြန်လည်စတင်ခဲ့သည်။
ငါကောင်းစွာချွတ်စတင်ခဲ့သည် ငါတစ်ပါတ်တစ်ကြိမ် pmo session တစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ်။ အစပိုင်းမှာတော့ကောင်းတယ်၊ အပြာကပျော်စရာကောင်းတယ်၊ ၁၀ မိနစ်လောက်ပဲကြာတယ်။ သို့သော်နှစ်ခုအစည်းအဝေးများပြီးနောက်, ငါအမှုအရာသတိထားမိလာတယ် ...
ပိုမိုကြည့်ရှုလိုသောဆန္ဒ - libido ဟုထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်စေသောစွဲလမ်းစေသောလှုံ့ဆော်မှုများ။
ငါညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုနှစ်သက်ပြီးလက်ရှိတွင်လိင်မဆက်ဆံသောကြောင့်တစ်ပတ်လျှင် ၂ ဆကန့်သတ်ချက်သည်သာမန်ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သည်ဟုဆုံးဖြတ်လိုက်သည်မှာမိနစ် ၂၀ သာကြာသည်။
ယခုဤတစ်ခါတလေ porn3xa တပတ်စောင့်ကြည့်ပိုမိုဒါမှမဟုတ်ဒီထက်ဖမ်းဒီပုံစံရန်ရှိသည်, ကျောရက်သတ္တပတ်အတော်ကြာခဲ့, သို့သော်ကျွန်မ 2-6 နာရီ session တစ်ခုကဲ့သို့အပိုညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်ဖွင့်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။
ဒါကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့2မိနစ်တောင်တစ်ပတ်ကိုရုံ 20 က x မှာပေါ်လာသည်နှင့်အတန်ငယ်ပြောင်းပြန်ခဲ့ကွောငျးအပြောင်းအလဲများပါ!
ပထမတစ်ခုမှာကဏ္ session တစ်ခုစီသည်ပျော်စရာနည်းသည်။ ပထမတော့ကျွန်ုပ်ကြည့်ရှု။ ကျေနပ်ရောင့်ရဲနိုင်သည်။ သို့သော်ဤပြောင်းလဲမှုလျင်မြန်စွာပြောင်းလဲသွားသည်။ တစ်ပတ်လျှင် ၂ ဆ၏ ၅ ကြိမ်မြောက်သင်ခန်းစာတစ်ခုစီသည်တစ်နာရီလျှင်တစ်နာရီခန့်ကြာမြင့်သည်။ porn သည် dopamine ဖြန့်ချိမှုနည်းသောကြောင့် (receptors များထပ်မံထုတ်လွှတ်မှုလျော့ချခြင်း) ကြောင့်ဖြစ်သည်။
စိုးရိမ်စိတ်များလာသည် - ဤအရာသည်သိသာထင်ရှားသည်။
* အခြားအရာများ၌ပျော်မွေ့မှုနည်းပါးခြင်း - (ငါညံ့ဖျင်းသောအဖြစ်အပျက်ကိုစောင့်ကြည့်နေပြီး pmo ၏အစည်းအဝေးများအပြီးတွင်ရုတ်တရက်အားလုံးသည် ပို၍ ပျင်းစရာကောင်းပြီးမယုံနိုင်လောက်အောင်လည်းနိမ့်ကျသောအဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရသောအခါအလွန်ပျော်နေသည်)
* လူမှုရေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုကိုလျှော့ချခဲ့သည်။ ဘာပြောရမည်ကိုမသိသော၊ အခြားသူကကျွန်ုပ်သည်လူသိများသည်ဟုထင်မြင်ယူဆသူများထံမှကြောက်စရာအတွေးများရှိခြင်း၊ ထိုအတွေးများကိုထပ်မံဖြည့်ဆည်းရန်မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှုကိုလျှော့ချခြင်း။
* ယုံကြည်မှုလျော့နည်းသွားသည်။ အခြားသူများနှင့်လက်ချင်းချိတ်ဆက်သွားသည်
* ပိုပြီး passive
* လျော့နည်းစွမ်းအင်, ဒီထက်အာရုံစိုက်နည်းလှုံ့ဆျောမှု
* လျှော့ချလိင်စိတ်, လိင်အတွက်လျော့နည်းခံစား
* တိုးလာအစာအိမ်ဝေဒနာ, တိုးမြှင့်ဘောလုံးကိုနာနှင့်မကောင်းတဲ့အာရုံ, ဆီးကျိတ်အီတိုးလာ
ဂိမ်းကစားခြင်း, junk အစားအစာ, အရက်စသည်တို့ကိုများအတွက် * ပိုပြီးစွဲလမ်း Impulses သတင်းပို့ ..
ငါပုံမှန်အစည်းအဝေး pmo မှ 40 နေ့ရက်ကာလအဘို့အဘယ်သူမျှမ pmo တစ်ပြည်နယ်ကနေလာမယ့်ခဲ့ပါတယ်အဖြစ်ဤပြောင်းလဲမှုများအပေါင်းတို့သည်ငါ့ကိုရန်အလွန်မြင်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။
ငါကသိတယ်ခင်မှာ pmo အစည်းအဝေးများ * cking နာရီ, f,6နာရီ6တက်တည်တံ့ခဲ့သည်!
ဤသူသည်ငါနှိုးဆွသောအရာတစ်ခုခုကိုရှာတွေ့ဖို့ပိုဗီဒီယိုများနှင့်ကြာကြာကြည့်လိုအပ်အဓိပ္ပာယ် porn ကနေခံစားလျော့နည်းသွားအဟောင်းကိုစွဲလမ်း Impulses သတင်းပို့အတူပြန်လာခဲ့ကြသည်ရိုးရှင်းစွာသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
အားလုံးအားလုံးအတွက်ကြောင့်ယေဘုယျအားဖြင့်အသက်တာကို (ရုပ်သိမ်းရေး၏ပထမရက်သတ္တပတ်ပြီးနောက်) မျှ pmo စဉ်အတွင်းအများကြီးပိုကောင်းကြောင်းပြောဘေးကင်းလုံခြုံသည်။
လူအပေါင်းတို့သည်ပြုပါခဲ့လျှင်သူတို့တစ်တွေခဏအကြောင်းအရာပေမယ့်ပျော်ရွှင်ဘယ်တော့မှဖြစ်စေခြင်းငှါတနေ့လုံးလက်ပတ်နာရီ porn ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဖြစ်မှန်မှာတော့သို့သော်ညစ်ညမ်းကြောင့်အလယ်အလတ်နိုင်ခြင်းသူတို့အဘို့အဘယ်သူမျှမရာအရပျရရှိထားသူ AND ကိုစိစစ်တဲ့အခါမှာသောသူတို့အားနေဆဲအနုတ်လက္ခဏာရောဂါလက္ခဏာတွေခံစားရသည်။
မနေ့ကငါ PMO လုပ်ခဲ့တုန်းကငါ့ရဲ့ adrenal ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုတွေမကုသမချင်းငါကိုယ်တိုင် PMO မလုပ်ဖို့ကတိပေးခဲ့တယ်။
ပင်ဖြည့်ညှင်းအတွက်ယခုတွင်ငါသည် PMO adrenal ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းနှင့်ကောင်းသောအိပ်စက်ခြင်းကုသဖို့ရန်ယုံကြည်သကဲ့သို့ငါ PMO ရန်မအကြောင်းပြချက်ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်၏ adrenal ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုသည် (ကောင်းသောအိပ်စက်ခြင်းအလေ့အထများနှင့်ကဖိန်းဓာတ်လျှော့ချခြင်းဖြင့်ကုသရန်အချက်တစ်ချက်ကိုကျွန်ုပ်သိထား) သွားသောအခါဖြစ်နိုင်သည်မှာ porn သည်ကျွန်ုပ်ဘဝတွင်ယခင်ကအသုံးပြုခဲ့သောအတိုင်း - 2-3 xa ပတ်စဉ်၊ အနုတ်လက္ခဏာလက္ခဏာများမရှိပါ ။
သို့သော်ကျွန်မ porn စွဲမ, ဒါမှမဟုတ်ငါ့ကိုယ်ကဒီပြည်နယ်ထဲမှာ pmo ကိုင်တွယ်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်စေ။
ကျွန်ုပ်သည် PMO မှရှောင်ရှားပါလိမ့်မည်။ (ကျွန်ုပ်မလိုက်သော) လိင်နှင့်အိုဖြစ်ခြင်း မှလွဲ၍
ကျွန်ုပ်၏ adrenal ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကိုကုသပြီးသောအခါအခြေအနေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါမည်။ သို့သော် ၅ နှစ်ကြာလျှင်ပင်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ adrenal ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကိုမကုသမှီတိုင်အောင် PMO'ing မဟုတ်ပါ။
မျှော်လင့်ဖြည့်ညှင်းစဉ်းစားသူမည်သူမဆိုအဘို့, ဤသူသည်သင်တို့အမှုအရာမှထွက်အလုပ်လုပ်စေခြင်းငှါ, ဘယ်လိုစိတ်ကူးတစ်ခုပေးပါလိမ့်မယ်။
LINK - ဖြည့်ညှင်းရလဒ်များကိုအတွက် porn
ဒါ့အပြင်တွေ့မြင် က reboot လုပ်ပြီးညစ်ညမ်းအသုံးပြုလိုကဘာလဲ?